Febroary 26, 2018 Febroary 26, 2018 ny Admin
Maniry ny reninao amin'ny reny Quotes Day ao amin'ny teny Espaniola anao amin'ny spain.Wish tamin'ny teny anglisy koa ho Bebe, na ho friend.Funny,mahafatifaty & nalaina ara-pivavahana no available.From ny Baiboly ho an'ny rafozam-bavy
Fetin'ny reny 2018 no bigest hetsika / ocassion ho family.Because lahy sy ny zanany vavy tia ny reniny izy ireo most.Because mihalehibe ny nahita azy ny time.This hetsika rehetra dia ankalazaina manerana izao tontolo izao ao Espaina na aiza eto amin'izao tontolo izao izany eto dia ny lisitry ny reny Quotes Day Spanish.Because rehetra amin'ny olona mahalala ny fiteny eo an-toerana tsara, ka izay no why.Get Reny Day Funny Quotes
Lisitry ny reny Quotes Day amin'ny teny espaniola 2018
Fetin'ny reny 2018 dia andro manokana izany natokana ho an'ny moms malala ao amin'ny olon-tiana, kolontsaina, ary manodidina ny planeta. Anna Jarvis fampielezan-kevitra amin'ny 1905 mba hamorona reny andro fialan-tsasatra ofisialy ao amin'ny America. Ny reniko dia maty tany indrindra ny marina izy amin'izany taona izany, ary te ho fahatsiarovana ny reniko, ny fiadanana mpikatroka, fa hahatonga loza whined miaramila nandritra ny Ady An-trano Amerikana. Fanampin'izany, Jarvis te-hiatrehana olana ny fahasalamam-bahoaka ny fankalazana ny Andron'ny Reny.
I Neny no tsara indrindra ny mpampianatra, mpampianatra ny fangoraham-po, ny fitiavana sy ny herim-po. Raha ny fitiavana dia mamy toy ny voninkazo, dia ny reniko dia mamy voninkazo ny fitiavana.
Andriamanitra dia tsy afaka ho eny rehetra eny, ary noho izany dia nanao reny.
Rehefa Neny maintsy hiara-misakafo ny 8, Ary mahazo ampy 16 ary ny antsasany ihany no nanompo.
Tsaroako ny reniko ny vavaka, ary izy ireo tamin'ny fanarahana Ahy foana. Izy ireo no nifikitra tamiko ny fiainako rehetra.
Ny zavatra manan-danja indrindra raim-pianakaviana atao ho an'ireo zanany dia ho tia ny reniny.
Images Of reny Quotes Day amin'ny teny espaniola
Images ny Reny Quotes Day amin'ny teny espaniola Omena eto ambany ny sary no fomba tsara indrindra hanehoana fihetseham-po
Sokajy Reny Quotes Day	Post Fikarohana